🥇 ▷ Ma jeceshahay OnePlus 7 Pro? Naqshadeynta 7T Pro ee cusub ayaa wax badan iska badali doonta! ✅
Ma jeceshahay OnePlus 7 Pro? Naqshadeynta 7T Pro ee cusub ayaa wax badan iska badali doonta!
OnePlus 7 Pro wuxuu ahaa suuq dhab ah oo lagu dhuftay, waana markii ugu horreysay taariikhda shirkadda, in mid ka mid ah taleefannadiisa casriga ah uu runtii awood u leeyahay inuu u hanjabaado tirada lacagta caymiska! Gaar ahaan Samsung, Huawei iyo Apple.
Marka, looma baahna in la yiraahdo, naqshada OnePlus 7 Pro waxay ahayd guul… Marka 7T Pro-ka cusubi waxay noqon doonaan kuwo isku mid ah, sax? Khalad!
Sida laga yaabo inaad ogtahay, OnePlus wuxuu jecel yahay inuu sii daayo laba taleefano oo casri ah sanad kasta isagoo leh ‘T’ moodel qeybtii labaad si uu ula tartamo kala iibsiga ka socda Samsung, Mate oo ka socda Huawei, iyo dabcan … iPhoneka cusub ee sida caadiga ah ku dhaca suuqa bisha Sebtember. .
Si kastaba ha noqotee, nooca ‘T’ wuxuu had iyo jeer aad ugu egyahay taleefannada casriga ah ee lasii daayay horraantii sanadka. Ka dib oo dhan, diiradda ayaa had iyo jeer ah kor u qaadista waxqabadka, iyo ku daridda astaamo cusub, oo aan naqshadeynin.
Laakiin sannadka 2019, waxay umuuqataa in shirkaddu ay dooneysay inay wax yar ka beddesho istiraatiijiyaddeeda! Jid ahaan, sii-daynta nooca Pro horeba way ka duwanaan jirtay wixii ilaa hada la qabtay. Marka sidaa la yaab ma noqon doonto soosaarista qaab saddexaad (iyo laga yaabee afraad) dabayaaqada sanadkan.
Kani waa tusaale, kaas oo si cajiib leh xitaa ugu dhuftay internetka bishii Diseembar 2018. Oo xiisaha lihi, wuxuu aad ula mid yahay waxaan fursad u aragnay inaan ka aragno Huawei Mate 30 Pro.
Hase yeeshe, waa qaabeyn aad uga duwan wixii aan ku aragnay OnePlus adduunka. Miyuu yahay OnePlus 7T Pro? Ka dib oo dhan, shirkadda ayaa horay u ballanqaaday inay diiradda saari doonto sawir cusub.
Sidoo kale, sidoo kale way fududaan doontaa in lagu kala saaro OnePlus 7 7T, maaddaama qeybta hore ay u egtahay isku mid … Laakiin waa maxay faa idooyinka ugu weyn ee nashqadani? Miyay bixisaa meel dheeri ah gudaha aaladda aaladda? Way fududahay in la abuuro nidaam sawir qaadis… yaa garanaya?
Ma jeceshahay OnePlus 7 Pro? Naqshadeynta 7T Pro ee cusub ayaa wax badan iska badali doonta! “Ka sokow, maxay kula tahay waxaas oo dhan?” Nala wadaag aragtidaada fikradaha hoose.